Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha XFS oo ku dhawaaqdey dib u howlgelinta dhismaha hey’adda Tayo-dhowrka Soomaaliyeed. – Radio Muqdisho
Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha XFS oo ku dhawaaqdey dib u howlgelinta dhismaha hey’adda Tayo-dhowrka Soomaaliyeed.
Hay’addaan ayaa ka hortagaysa Badeecadaha khatarta ku ah Caafimaadka dadka iyo deegaanka, sidoo kale soo dajinta iyo isticmaalka Badeecadaha dhacay ama tayadeedu Liidato si loo ilaaliyo badqabka caafimaadka dadka Soomaaliyeed.
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa faah-faahin dheeri ah ka bixiyey muhiimadda Ganacsiga iyo guud ahaan Dalka u leedahay hey’adda Tayo-dhowrka Badeecadaha Soomaaliyeed.
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha ayaa uu magacaabay 5 xubnood hey’adda Tayo-dhowrka iyo badqabka Badeedaha Dalka soo gala.
Xubnaha Guddiga Tayo dhowrka Soomaaliyeed waxay kala yihiin
Dhinaca kale wasiir Maareeye ayaa sharraxaad ka bixiyey xeerka ay ku shaqeyneyso hey’adda Tayo-dhowrka.
Hey’addaan ayaa hoostageysa wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya, waxa ay xarumo kala duwan ku yeelan doontaa dhammaan gobollada Dalka, si sare loogu qaado Tayada waxyaabaha Dalka ka soo gala Dekedaha, Garommada iyo Xuduudaha Dalka.
Tartan Lagu Xusayay Faarax Sendiko oo ka dhacay Toronto